Gaalkacyo: Madaxda gobolka, kuwa degmooyinka iyo guddiga abaaraha oo ka arrinsaday xaaladda abaaraha. – Radio Daljir
Gaalkacyo: Madaxda gobolka, kuwa degmooyinka iyo guddiga abaaraha oo ka arrinsaday xaaladda abaaraha.
Maarso 27, 2011 12:00 b 0
Kulankaasi oo muddo saacado ah socday waxaa looga arrinsanayey xaaladaha abaareed ee ka taagan deeggano badan oo ka mid ah gobolka Mudug taas oo muddooyinkii ugu danbeeyey ay la taacalayeen maamulka qaybihiisa kala duwan, hay’adaha caalamiga ah, kuwa maxalliga ah,shirkado ganacsi iyo shaqsiyaas si iskood ah isku xilqaamay.
Kulankaan maanta ee ka dhacay xarunta maamulka gobolka waxaa kaloo lagu qorfeeyey qoon-daynta iyo qaybinta gargaar cunno oo waddanka Imaaraadka Carabta ugu deeqday Puntland, kaas oo gobolka Mudug uu qayb ahaan u helay raashin dhan 110 tan, oo iskugu jirta cunnada qutul-daruuriga ah sida bariis, bur, sonkor, saliid iyo timir, waxaana isla maanta deeqdaasi loo sii kala qaybiyey degmooyinka kala duwan ee gobolka iyo sidoo kale dadka curyaanka ah oo qoonto gaar ah loo sameeyey.
Markii kulankaasi uu soo gabo-gaboobay ayey masuuliyiintii heer gobol iyo heer degmo iyo sidoo kale guddiga abaaruhu waxay si wadajir ah uga hadleen ujeedada kulankooda iyadoo ka warbixiyey dhibaatada abaaraha iyo siday u saamaysay dhammaan degmooyinkii ay ka kala yimaadeen iyo taakulada wax-qabad ee illaa iyo haatan lala gaaray dadka abaaraha iyo biyo la’aantu iskugu darsameen.
Guddoomiyaha gobolka Mudug Axmed Cali Salaad oo si guud uga warramay shirka maanta ayaa ku dheeraaday xaaladda abaareed ee ka taagan gobolka Mudug, iyo gacanta laga gaystay sidii loo caawin-lahaa dadka iyo duunyada la il-daran dhibaatada abaarta.
Guddoomiyuhu waxaa uu sheegay in ay gobolka ka taagan tahay xaalad abaareed oo aan la dhanyalsan karin, taas oo la degtay dadka iyo duunyadaba, waxaana uu sheegay haddaan si deg deg ah wax looga qaban, loona caawin dadka dhibaataysan in ay ka dhalan-karto xaalad kahatar ah oo keeni karta dhimasho dad.
Dhanka kale guddoomiyayaasha degmooyinka Galkacyo, Jarriiban, Xarfo iyo Galdogob iyo sidoo kala xubnaha guddiga abaaraha oo iyana shirkaasi ka hadlay ayaa muujiyey inta ay le’eg tahay saamaynta abaartu ay ku yeelatay dadka iyo duunyada, waxaana ay si siman uga dayriyeen heerka ay gaarsiisan tahay abaarta iyo biyo la’aantu.
Kulanka maanta ee looga arrinsanayey abaarta iyo biyo la’aanta iyo qoondaynta deeqaha gargaar ee ka dhacay xarunta maamulka gobolka Mudug ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu danbeeyey si weyn looga soo dayrinayey xaaladaha abaareed ee ka jira dhammaan deegaannada Puntland gaar ahaanna gobolka Mudug.
C/fitaax C Geeddi,
“Puntland waa u sharaf-dhac in ajnabi la soo qafaashay madax-furasho loogu haysto dhulkeeda” G/lle Dhexe Gantaal.
Dawlada Puntland oo biyo-dhaamis & raashin qaybis ka bilawday degmooyin ka tirsan gobolka Nugaal.